အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆိုဒ် များကို ချုံ့ပေးသည့် Freeware ~ ITmanHOME
09:15 နည်းပညာ No comments
အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆိုဒ် များကို ချုံ့ပေးသည့် Freeware
အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဆိုဒ်များကို ချုံ့ပေးသည့် Freeware
တချို့သော ပုံတွေဟာ ဆိုဒ်ကြီးမားနေတဲ့အခါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်ရအောင် ပြန်ချုံ့ပေးရပါတယ်။ အရင်ကဆို အဲလို ဆိုဒ်ချုံ့ဖို့ Photoshopကိုပဲ သုံးရပါတယ်။ အခု Freewareတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ အလွန် အသုံးဝင်လှပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ် သေးငယ်တဲ့အပြင် လွယ်လွယ်ကူကူ ချုံ့နိုင်လာပါပြီ။ အဲဒီလို ဖိုတိုရီဆိုဒ်ဇင်း လုပ်တဲ့ Freeware တွေထဲက အကောင်းဆုံး တစ်ခုကတော့ Pixresizer လို့ခေါ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကို ချုံ့နိုင်ရုံသာမက Batch Resizing လို့ခေါ်တဲ့ ပုံအများကြီးကို တပြိုင်နက် ချုံ့နိုင်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Download current version (2.0.5)
You will be prompted to choosealocation on your computer to save the file to. Should you experience download problems, click here to try at another location.
DOWNLOAD [ 3.3 Mb .zip]
Download an older version compatible with Windows 95
From version 2.0.0 up, PIXresizer will not run on this older system anymore. However, you can still access and use version 1.0.9 without loosing too much functionality. Get it here:
အထက်ပါဖော်ပြသည့်အတိုင်းမိမိ OSဖြင့် အဆင်ပြေမယ် နေရာမှdownload ယူနိုင်ပါသည်...
အထက်ပါ ကျနော်အခု တင်ပေးနေသည့် အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာ ကျနော် ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် သုံးစွဲပြီးသား ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ထဲကအကောင်း ဆုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ အကောင်းဆုံး လို့ ပြောတာကတော့ ကျနော်သုံးစွဲရတာ လွယ်ကူအဆင်ပြေမှုနဲ့ အစွမ်းထက်မှု အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုယ့်သဘောကျ ရွေးချယ်ထားတာ ဖြစ်လို့ တခြား ဘယ်သူနဲ့မှ တထပ်တည်း တူညီမှုတော့ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကိုယ်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အခက်အခဲ ရှိလျှင် ကွန်မန့်ချန်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အခကြေးငွေ နဲ့မှအပအခြားသူများကို ပညာဒါဖြင့် နှစ်သက်သလို လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ။